စင်ကာပူ လေကြောင်းလိုင်း-ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ချစ်ပ် ရောင်းချ မှုတွင် တရုတ်၏ ဝေစု သည် ဥရောပ နှင့် ဂျပန် တို့ နှင့်နီးစပ် သည် – Pandaily
စင်ကာပူ လေကြောင်းလိုင်း-ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ချစ်ပ် ရောင်းချ မှုတွင် တရုတ်၏ ဝေစု သည် ဥရောပ နှင့် ဂျပန် တို့ နှင့်နီးစပ် သည်
Jan 11, 2022, 19:44ညနေ 2022/01/11 23:12:47 Pandaily
Semiconductor စက်မှုလုပ်ငန်း အသင်း (SIA)တနင်္လာနေ့က အမေရိကန် မှာ ထုတ်ပြန် တဲ့ အစီရင်ခံစာ တစ်ခုမှာ တရုတ် ပြည်မ ကြီးရဲ့ ကုမဏီ တွေရဲ့ ကမ္ဘာ ချီ ချစ်ပ် ရောင်းချ မှုဟာ ကြီးထွားလာ နေပြီး အဓိကအားဖြင့် တရုတ် နဲ့ အမေရိကန် ကြားက တင်းမာမှု အမျိုး မျိုးနဲ့ အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံ့ငွေ တွေ၊ ဝယ်ယူ ရေး မက်လုံး တွေနဲ့ တခြား ဦးစားပေး မူဝါဒ တွေကနေ တစ်ဆင့် သူ့ရဲ့ ချစ်ပ် လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးကို မြှင့်တင် ဖို့ ယခင် လုပ်ငန်း ရဲ့ ကြိုးပမ်း မှုတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
SIA ၏ လေ့လာဆန်းစစ် မှုအရ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ waferless semiconductors စျေးကွက် ဝေစု သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၁၀% ရှိရာမှ ၁၆% အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ် ခန့်က တရုတ်နိုင်ငံ၏ semiconductor device ရောင်းချ မှု သည်ဒေါ်လာ ၁၃ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ချစ်ပ် ရောင်းအား ၏ ၃. ၈% သာရှိသည်။ သို့သော် SIA ၏ သုံးသပ် ချက်အရ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ စက်မှုလုပ်ငန်း သည်မ ကြုံ စဖူး နှစ်စဉ် တိုးတက်မှုနှုန်း ၃၀. ၆% ရရှိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း နှစ်စဉ် ရောင်းအား မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၉. ၈ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။ တိုးတက်မှု မြင့်တက်လာ ခြင်းက ၂၀၂၀ တွင်တရုတ် နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ စျေးကွက် ၏ ၉% ကို သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ပြီး ဂျပန် နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ တို့က စျေးကွက် ဝေစု ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း စီ ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ အတွက် ရောင်းအား ကိန်းဂဏန်း များကို ထုတ်ပြန် ခြင်းမရှိသေးပါ။
တရုတ်၏ ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုသည် ခိုင်မာသော အရှိန်အဟုန် ကိုဆက်လက် ထိန်းထား မည်ဆိုပါက လာမည့် သုံး နှစ်အတွင်း နှစ်စဉ် ၃၀% တိုးတက်မှုနှုန်း ကိုဆက်လက် ထိန်းသိမ်း ထားပြီး အခြား နိုင်ငံများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး များတွင် စက်မှု တိုးတက် မှုနှုန်းမှာ မပြောင်းလဲ ဘဲ ရှိနေ သည်ဟုယူဆ လျှင်-၂၀ ၂၄ ခုနှစ်တွင် တရုတ်ပြည်မကြီး ရှိ ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ စက်မှု လုပ်ငန်း၏ နှစ်စဉ် ဝင်ငွေ သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၆ ဘီလီယံ အထိရောက်ရှိ နိုင်ပြီး ကမ္ဘာ့စျေးကွက် ဝေစု ၏ ၁၇. ၄% ကျော်ရှိသည်။ ဤအချက် က ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာ့စျေးကွက် ဝေစု သည်အမေရိကန် နှင့် တောင်ကိုရီးယား ပြီးလျှင် ဒုတိယ နေရာတွင်ရှိသည်။
ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ စက်မှုလုပ်ငန်း သို့ ၀ င်ရောက် လာသော ကုမ္ပဏီ အသစ် များသည်လည်း အထင်ကြီး စရာ ကောင်းသည်။ ၂၀၂၀ တွင်တရုတ် ကုမ္ပဏီ ၁၅၀၀၀ နီးပါး သည် ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ ကုမ္ပဏီ များအဖြစ် မှတ်ပုံ တင်ခဲ့သည်။ ဤ ကုမ္ပဏီ အသစ် များ၏ အများစုသည် GPU, EDA, FPGA, AI computing စသည့် အဆင့်မြင့် ချစ်ပ် ဒီဇိုင်းကို အထူးပြု သည့် အခမဲ့ free startup များဖြစ်သည်။ ဤ ကုမ္ပဏီ အများစုသည် အဆင့်မြင့် ချစ်ပ် များ ကိုတီထွင် ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲ ခြင်းနှင့် သွေးထွက် ခြင်း အစွန်း ရှိ လုပ်ငန်းစဉ် ဆုံ မှတ် များ မှထုတ်ယူ ခြင်းများ ကိုပြုလုပ် နေကြသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:China VC အပတ်စဉ်: စမတ် ထုတ်လုပ်မှု, ချစ်ပ်, etc
တရုတ်ပြည်မကြီး ရှိ အဆင့်မြင့် ယုတ္တိဗေဒ ပစ္စည်းများ၏ ရောင်းအား သည် အရှိန် မြင့် နေသည်။ တရုတ်၏ CPU, GPU နှင့် FPGA ကဏ္ three သုံးခု ၏စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေသည် တစ်နှစ်လျှင် ၁၂၈% နှုန်းဖြင့် တိုးတက် နေပြီး ၂၀၂၀ တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ နီးပါး ရှိ မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၆၀ ရှိခဲ့သည်။
SIA ၏ လေ့လာဆန်းစစ် ချက်အရ တရုတ် ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် ၏ ကဏ္ four ခွဲ လေးခု စလုံး တွင်-Fabless, IDM, foundry နှင့် OSAT-တရုတ် ကုမ္ပဏီများသည် နှစ်စဉ် တိုးတက်မှုနှုန်း ၃၆% ၊ ၂၃% ၊ ၃၂% နှင့် ၂၃% အသီးသီး ဖြင့် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၀ င်ငွေ လျင်မြန်စွာ တိုးတက်ခဲ့သည်။ တရုတ်၏ ထိပ်တန်း ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ ကုမ္ပဏီများသည် ပြည်တွင်း နှင့် ကမ္ဘာအနှံ့ တွင် စျေးကွက် ကဏ္ several များစွာတွင် တိုးချဲ့ လျက်ရှိသည်။
ဆိုင်းဘုတ် အားလုံးက တရုတ် ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ ချစ်ပ် ရောင်းအား လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာ ဖွယ် ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် အဆင့်မြင့် node casting ထုတ်လုပ်မှု၊ ပစ္စည်းကိရိယာ များနှင့် ပစ္စည်းများအတွက် တရုတ်နိုင်ငံ သည်လက်ရှိ စက်မှုလုပ်ငန်း ခေါင်းဆောင်များနှင့် အမီလိုက် ရန် အဝေးကြီး ရှိနေသေး သော်လည်း လာမည့် ဆယ်စု နှစ်အတွင်း ကွာဟ မှု ကျဉ်းမြောင်း မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
တ႐ုတ္ အင္တာနက္ ကုမၸဏီႀကီး အလီ ဘာ ဘာ တြင္ ခ်ာ လီ မန္း ဂါ ၏ ရွယ္ယာ ႏွစ္ဆ နီးပါး ျမင့္တက္
Warren Buffett ၏ ရင်းနှီး သော စီးပွားရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Charlie Munger ပိုင် ဆိုင်သော သတင်း စာနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲ ကုမ္ပဏီ Daily Journal Corp က ကုမ္ပဏီ သည်၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင် မှုများ ကိုတိုးမြှင့် လိုက် ပြီဟု ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်အလီ ဘာ ဘာအမေရိကန် စတော့ရှယ်ယာ ဈေးကွက်တွင် ။